Fivondronan’ny orinasan’i Vakinankaratra: misongadina ny fambolena, ny fiompiana, ny indostria | NewsMada
Fivondronan’ny orinasan’i Vakinankaratra: misongadina ny fambolena, ny fiompiana, ny indostria
Manao ezaka, araka izay tratrany, ny Fivondronan’ny orinasan’i Vakinankaratra (Fiova) hatramin’ny nanaovana fampisehoana any amin’ny faritra, tonga amin’ny andiany faha-21 tamin’ity taona ity. Nampahatsiahy ny filohan’ny Fiova, Ramarijaona Andrianjafy, momba ny fiaraha-miasa ho fampitaovana ireo orinasa, ny fampitoviana ny lafiny teknika momba izany fitaovana izany ary ny vidiny.
Mijery ny hoavy hanatsarana ny seha-pihariana karazany maro misy ny orinasa tsirairay ny Fiova. Mampisongadina sy mampiavaka azy ireo ny fambolena sy ny fiompiana, ny indostria mpanodim-bokatra, sy ny sampana amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana sy avy amin’ireo tsy miankina. Fantatra izany isan-taona. Samy mahita tombontsoa tandrify azy ireo mpandraharaha mpitantana orinasa, araka ny tomban’ezaka nataon’ny Fiova. Hita ivelan’ny faritra Vakinankaratra koa ny ataon’ny mpandraharaha mpikambana.
Ankoatra ny asa vita, manao fikarohana ho amin’ny fanatsarana ny asa ny ao amin’ny Fiova, mampahafantatra ny vokatr’izany sy ny fomba fanatanterahana azy. Manokana lohahevitra samihafa izy ireo, ho fampandrosoana ny fihariana. Voateny matetika ny tsy fahampian’ny famatsiana angovo, ny faharatsian-dalana, ny tsy fandriampahalemana. Nambaran’ireo mpikambana fa tsy mifanaraka amina tamberin’andraikitra andrasana amin’ny fanjakana ireo olana ireo, nefa mandoa hetra ara-dalàna izy ireo.